GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
IHE ỤFỌDỤ NDỊ NA-EKWU: “Ọ bụ Chineke na-achị ụwa, n’ihi ya, ọ bụ ya na-akpata ọdachi ndị na-eme n’ụwa. Nke a na-egosi na obi tara ya mmiri.”
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ụwa dum dị n’aka ajọ onye ahụ.” (1 Jọn 5:19) Ònye bụ “ajọ onye ahụ”? Baịbụl kwuru na ọ bụ Setan. (Matiu 13:19; Mak 4:15) Ihe a Baịbụl kwuru ò siri ike nghọta? Chegodị echiche: Ọ bụrụ na ụwa dị n’aka Setan, ihe ọ pụtara bụ na ọ na-eme ka ụmụ mmadụ dị ka ya, ya bụ, ka ha dịrị anyaukwu ma na-achọ ihe ga-abara naanị ha uru. Ọ na-emekwa ka ndị mmadụ ghara ịchọ ịma nsogbu ihe ndị ha na-eme ga-akpatara ha na ndị ọzọ. Ọ̀ bụ na nke a anaghị eme ka anyị ghọta ihe mere ụmụ mmadụ ji na-emebisị ụwa a ha bi na ya? Ndị ọkachamara kwuru na o nwere ike ịbụ otú a ndị mmadụ si na-emebisị ụwa na-akpata ọdachi ndị na-emere onwe ha ma ọ bụ na-eme ka ọdachi ndị ahụ na-aka njọ, ma ọ bụkwanụ na-asụkwu ndị mmadụ akwụ ma ha mee.
Gịnịzi mere Chineke ji hapụ Satan ka ọ na-eduhie ụmụ mmadụ? Anyị ga-amata azịza nke ajụjụ a ma ọ bụrụ na anyị echeta ihe mere obere oge e kechara mmadụ. N’oge ahụ, nne na nna anyị mbụ jụrụ ọchịchị Chineke. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ụmụ mmadụ emeekwala otu ihe ahụ. Ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ achọghị ka Chineke chịwa ha, ihe ọ pụtara bụ na ha họọrọ ka Setan, bụ́ onyeiro Chineke, na-achị ha. Ọ bụ ya mere Jizọs ji kpọọ Setan “onye na-achị ụwa.” (Jọn 14:30) Ma Setan ọ̀ ga-achị ruo mgbe ebighị ebi? Mba.
Nke a apụtaghị na ahụhụ Setan na-akpatara anyị anaghị emetụ Jehova * n’obi. N’eziokwu, ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata na-ewute Chineke. Dị ka ihe atụ, lekwa ihe Baịbụl kwuru n’oge ụmụ Izrel na-ata ahụhụ. Ọ sịrị na “n’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.” (Aịzaya 63:9) Ebe Chineke bụ Chineke obi ebere, o kpebiela na ọchịchị Setan ga-akwụsị n’oge na-adịghị anya. O meekwala Ọkpara ya Jizọs Kraịst, bụ́ onye ezi omume nke dịkwa obiọma, eze ka ọ chịa ruo mgbe ebighị ebi.
OTÚ IHE A BAỊBỤL KWURU SI GBASA GỊ: N’agbanyeghị n’ọchịchị Setan enwebeghị ike ime ka ọdachi ndị na-emere onwe ha ghara ịkpatara ụmụ mmadụ nsogbu, ọchịchị Jizọs ga-eme ka ọdachi ndị na-emere onwe ha kwụsị. O nwere mgbe Jizọs mere ka oké ifufe nke fere n’oké osimiri ghara imerụ ndị na-eso ụzọ ya ahụ́. Baịbụl kwuru, sị: ‘O wee bilie baara ifufe ahụ mba, sịkwa oké osimiri ahụ: ‘Shịị! Daa jụụ!’ Ifufe ahụ wee kwụsị, ebe niile wee daa jụụ.” Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ihe merenụ, ha sịrị: “Ònye n’ezie ka onye a bụ, n’ihi na ọbụna ifufe na oké osimiri na-erubere ya isi?” (Mak 4:37-41) Ihe ahụ Jizọs mere na-eme ka obi sie anyị ike na mgbe ọ ga-achịwa ụwa, ọ ga-echebe ndị niile na-erubere Chineke isi.—Daniel 7:13, 14.
^ para. 5 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.